SAMOTALIS: AYAAMAHA BARAKEYSAN IYO CIMRADII XARAMKA-3
Waa biyaha samsamka een kala go’a lahayn ee daawo iyo barakaba u garka tahay.
Haddaan intaas ku soo kooba intaan gaar u dareemey iyo xusuusteyda, waxaan mar kale idinla wadaagi hawlaha ay qabtaan shaqaalaha masjidku iyo iskaashiga loo dhan yahay. Bal waxaad qiyaastaa dad laba milyan ah oo dhowr boqol oo mitir square ku xooban, kala af ah, kala jinsi ah, rag iyo dumar, waayeel la riixaayo iyo dhalin botorinaysa, haween shaqlan oo kulka haya aan marna wajiga fureyn. Bal waxaad ku biirisaa dadkaas oo dul socda marmarka nooca muraayadda ah oo weliba dhammaan cunaaya timir. Bal maxaad fileysaa marmarka iyo lafta timirta iyo guclada muuminiinta, sow ma aha jab iyo dhac waxaad sugaysaa. Waa yaab oo marna maan arag cid dhacday iyo qof turunturooday amba sibibixday toona. Waayo dad tayeysan oo qiireysan ayaa Alle u diray. Waxa iyana barbar socda wacyigelinta oo dadka inta badani ay timirta ku ridayaan baco ooy ka ilalinayaan inay dhulka u dhacdo. Nadaafadda sida loo adkeeyey ee loo maareeyey waa yaab iyo amakaag. Kol keliya ayaad maqlaysaa dhawaaq iyo goobaabo la xidhay oo il bidhiqsi dadka laga joojiyey iyagoo saf siman ugu yareen 50 nadiifiye ay garabka isku hayaan deedna ay mafiiq dheer ay sinta isu saarayaan iyagoo ordaayana ay furayaan halkii ay dadka ka joojiyeen deedna kolba goob sidaas u nadiiifinaaya. Waa hawl aan nasasho lahayn is-tag lahayn, cid ku haleyn lahayn, xamaasad iyo daacadnimo ku dhantay, ajar iyo kheyr-doona hagaayo. Waa nimco Alle iyo iimaanka muuminka. Ma aha oo keliya shaqo dhuuni iyo dhandhan loo galay.
In badan ayaan hore u cimreystay laakiin tani waxay ii ahayd mid gooni ah waayo keligey oon cid la socon ayaan tegay,waxaanan helay fursad aan nafteyda aan ku keliyeysto, cibaadada Alle mooyee aan wax kale i mashquulin. Waxaan ogaaday inay tahay calal aqal hal mar inuu qofku keligii cimreysto si uu ugu go’o cibaadada iyo dareenka barakada yuuruurta Xaramka iyo agagaarkiisa.
Labels: AHMED ARWO, ISLAM, Islam:Aqeedah, RAMADAN